Jilaa Muslim ahaa oo muhim u ahaa Bollywood oo faja’ u dhintay + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Jilaa Muslim ahaa oo muhim u ahaa Bollywood oo faja’ u dhintay...
Jilaa Muslim ahaa oo muhim u ahaa Bollywood oo faja’ u dhintay + Sawirro
(Mumbai) 29 Abriil 2020 – Jilaaga caanka ah ee Irrfan Khan, oo ka mid ahaa ruug caddaaga Bollywood isla markaana ahaa ragga ay Bollywood caalamiyan u iibiyaan isagoo wax ka jiley aflaanta Hollywood, ayaa dhintay isagoo 53-jir ah.
Khan ayaa isagoo isbatoore booliis ah ku jilaya film-ka caan baxay ee “Slumdog Millionaire” sidoo kalena wuxuu ku jiraa film-ka mala awaalka ah ee “Jurassic World.” Wuxuu sidoo kale kasoo muuqday “The Amazing Spider-Man” iyo film-ka tacabburka ah ee “Life of Pi.”
Allaha u naxariistee, Khan oo Muslim ahaa ayaa dhintay kaddib markii Arbacadii Isbitaalka Mumbai ee Kokilaben Dhirubhai Ambani loola cararay, isagoo uu caabuq uga dhacay dhanka mindhicirrada.
Khan oo ku af billowday film-kii najaxey ee daraamaha ahaa ee “Salaam Bombay!,” oo la sameeyay 1988-kii oo ka hadlayey carruur derbi jiifka ah ee Mumbai’, ayaa 2018-kii laga helay kansarka naadirka ah ee neuroendocrine cancer kaasoo inta badan ku dhaca mindhicirrada, waxaana bilo dawayn maaratoon ah lagu soo siiyey UK.
Previous articleAMISOM oo la siiyey agab ciidan oo asaasi ah & weerar culus oo la qorshaynayo + Sawirro
Next articleGabar Soomaali ah oo su’aal adag hor dhigtay Madaxwayne Xigeenka Maraykanka (Daawo)